Linux boot ကို E4rat နဲ့ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ Linux မှ
Linux boot ကို E4rat နဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နည်း
E4rat (Ext4 - Accessing Times Reducing) သည်အစုတခုဖြစ်သည် tools တွေ အတွက် boot process ကိုမြန်စေပါstartup တွင်တင်သော application များ၊ ပထမ ၂ မိနစ် startup တွင်အသုံးပြုသောဖိုင်များကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ သူတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ y သူတို့ကို preloadingရှာဖွေမှုအချိန်နှင့်လည်ပတ်မှုနောက်ကျခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဤသည်မြင့်မားသော hard drive ကိုလွှဲပြောင်းမှုနှုန်းကို ဦး တည်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည်အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။ startup နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ ဖိုင်များပြန်လည်ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း၊
၎င်းကိုသံလိုက် disk များနှင့်သာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကို ext4 တွင် format လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ။
ငါတို့နဲ့စမယ် ပရိုဂရမ်ကို download လုပ်ပါ.
ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ Ureadahead ကိုဖျက်ရမည်၊ သို့မှသာ၎င်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။
sudo dpkg --purge ureadahead ubuntu-minimal ဖြစ်သည်
e4rat အတွက်မှီခိုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သည်။
sudo apt-get ကိုထည့်သွင်းပါ။ libblkid1 e2fslibs
ပြီးရင် program ကို install လုပ်လိုက်တယ်။
အခုငါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအလွယ်တကူရှင်းပြနိုင်မယ်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ grub (သို့) grub2 ကိုအဖြစ်အပျက်များကဲ့သို့တည်းဖြတ်ရမည်။
init = / sbin / e4rat- စုဆောင်း
linux /boot/vmlinuz-2.6.38-10-generic root = UUID = 92f37630-c3b4-476b-a0ab-f4a0d9f4180f ro တိတ်တိတ်ပိတ် vt.handoff =7init = / sbin / e4rat-collect
အရင်ခြေလှမ်းက startup နဲ့အတိအကျအတူတူလုပ်နိုင်တယ်၊ grub မျက်နှာပြင်ထွက်လာတဲ့အခါငါတို့ OS ရဲ့လိုင်းမှာရှိနေပြီး 'e' ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် disk ထဲတွင်စနစ်များစွာတပ်ဆင်ထားပါကအခြားသူများ၏ startup တွင်ပါဝင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ကြဉ်သောကြောင့်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။
ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အယ်ဒီတာ Ctrl + X ကိုပိတ်ပြီးပြန်စသည်။
သူက system ကို loading ပြီးတာနဲ့၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏစဖွင့်သော browser များ၊ mail manager ကဲ့သို့သော program များကိုဖွင့်ရမည်။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်တမ်းဖိုင်ကိုဖန်တီးပြီးကြောင်းသေချာပါစေ။
အဖြေက startup.log ဖြစ်ရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အားမည်သည့်အရာကိုမဆိုပြသခြင်းမရှိပါကသင်အဆင့်များကိုထပ်မံလုပ်ရန်လိုလိမ့်မည်။
အခု grub ကိုပြန်ပြောင်းတော့မည်။ ယခုငါအထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းeကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် home screen မှပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖော်ပြခဲ့သောမျဉ်း၏အဆုံးတွင်တစ်ခုတည်းသော parameter ကိုထည့်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့အဲဒါကိုလုံခြုံတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် command line ကနေလုပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ဖြင့် log in လုပ်ပြီး execute:
ဤအရာပြီးသည်နှင့် e4rat သည်ဖိုင်များကိုသင်၏ disk မှရွှေ့ပြောင်းလာသည် (ခဏကြာလိမ့်မည်) ။ ပြီးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် reboot လုပ်သည်။
sudo shutdown -r ယခု
ပရိုဂရမ်သည်အမြဲတမ်းအစတွင်လည်ပတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မွမ်းမံလျှင်ပင်ကြာရှည်ခံစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ grub ကိုတည်းဖြတ်သည်။
sudo nano / etc / default အ / GRUB
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "တိတ်ဆိတ်တဲ့ splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "init = / sbin / e4rat-preload တိတ်ဆိတ်တဲ့ splash"
ဖိုင်ကိုသိမ်းပြီး grub ကိုပြန်ဖွင့်သည်။
sudo update ကို-GRUB
ငါတို့မှာပြီးပြီ။ ယခုမှစ။ , ပုံမှန်အစီအစဉ်များ startup မှာပိုမိုလျင်မြန်စွာ load လိမ့်မည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် စီမံကိန်းစာမျက်နှာ sourceforge မှာ။
အရင်းအမြစ်: Linux ဇုန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Linux boot ကို E4rat နဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပြန်ကြားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်မအောင်မြင်ပါ၊ သင်ပို့စ်ကို LM နှင့်အဆင့်မြှင့်ရန်အချိန်ရှိပါကအလွန်ကောင်းပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါပလော။
ထိုအချိန်ကငါ Ubuntu နှင့်အတူကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါ LM နှင့်အတူကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိသင့်ပါတယ်ပုံပါဘဲ။
မင်္ဂလာပါထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကောင်းပါတယ်။ LM 13 နဲ့စမ်းကြည့်ပါလား။ အလုပ်များ?။
အတိအကျ! ၎င်းကိုအခြား distros များတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အကြံဥာဏ်မှာပရိုဂရမ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်၊ နောက်ဆုံးပေါ် (ယေဘုယျအားဖြင့် Ubuntu အသုံးပြုသူများနှင့်ဘလော့ဂ်ဖတ်ရှုသူများအတွက်) အတွက်တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်များကိုရှင်းပြရန်ဖြစ်သည်။ အခြားအဝေးထိန်းပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်နေရာတွင်ပိုမိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုသိလိမ့်မည်။
ရိုက်နှက် ၁ ဟုသူကပြောသည်
ငါကြိုးစားပြီးသည်နှင့်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်၏ gdm ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Ubuntu 5.0 ကိုအခြေခံထားသော trisquel 11.04 ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ graphical environment ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်တည်းဖြတ်ရန်မည်သည့်ဖိုင်ရှိသလဲဆိုသည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၎င်းသည်အခြား distros များအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ Archlinux ñ.ñ
Adrian garcia ဟုသူကပြောသည်
၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားထည့်သွင်းခွင့်မပေးပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ် terminal ကိုရောက်သည်။
/usr/share/cmake-2.8/Modules/FindBoost.cmake:1138 (message) တွင် CMake အမှား:
တောင်းဆိုထားသော Boost စာကြည့်တိုက်များကိုရှာမရပါ။
Boost header ဖိုင်များကိုရှာမရပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး BOOST_ROOT ကို root သို့ပြောင်းပါ
Boost သို့မဟုတ် BOOST_INCLUDEDIR ပါ ၀ င်သော directory ပါ ၀ င်သော directory သို့
Call Stack (လတ်တလောခေါ်ဆိုမှုပထမ):
CMake အမှားသည် src / cmake / Findext2fs.cmake: 17 (MESSAGE) -
Adrian Garcia သို့စာပြန်ပါ
အိုကေ၊ သင်သည် deb package ကို download လုပ်နိုင်သည်။ ရင်းမြစ်များကိုငါတိုက်ရိုက်ကူးယူခဲ့သည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်ဖိုင်ကြိုတင်တင်ထားခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော် ...
Linux ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုကိုစတင်ရန်ဤမျှကာလပတ်လုံးကြာပါသလောကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကိစ္စလား။ ကျွန်ုပ်တို့ထပ်တူထပ်မျှညည်းညူနေပါသလား။
ဆဲလ်ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်တာကငါ့ကိုမလွယ်ကူပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်ရှိကယ်ဆယ်ရေးစက် Slax ကဒီဖိုင်စနစ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမစီမံနိုင်တာကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာ Ext4 နှင့်ပြဇာတ်တပုဒ်ရှိတယ်။ 😉
ဤကဲ့သို့သောအရာသည်အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်ဖြစ်ပျက်ပါသလား။
grub configuration file ကို system ၏ super user အဖြစ်သင် edit လုပ်ရမယ်။ ဒီနည်းလမ်းကအပြောင်းအလဲတွေကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။ ရွှင်လန်းမှု…
ကောင်းပြီ၊ boot ကနေတည်းဖြတ်တဲ့အခါငါပြwhenနာတက်တယ်။
လိုင်းတစ်ခုတည်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ctrl + x ကို Pulse
ပြီးတဲ့နောက်မျက်နှာပြင်ကအမည်းရောင်ဖြစ်နေပြီးငါ restart လုပ်ရမယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Debian မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ အလွန်အကျွံမှီခို (libboots) ပေမယ့်အရာအားလုံး ok ။
ငါဒီ optimization SSD ကို drives တွေကိုအဘို့အအသုံးမကျဖြစ်ပါသည်, ဟုတ်သလော
Linux kernel ၃.၃ တွင် RC (ရှိပြီးသားထုတ်ခံရမည်) ရှိပြီးသား